मुटुरोगसम्बन्धि हाते पुस्तक - Naya Online
सोमवार, अशोज १९, २०७७ (October 5th, 2020 at 9:26am ) ब्रेकिंग न्युज, स्वास्थ्य
वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा.युवराज लिम्बू ‘मुटुरोग, जानकारी र रोकथाम’ पुस्तकसहित आएका छन् । यस पुस्तकले मुटरोग लाग्नुको कारण, लाग्न नदिनको लागि गर्न सकिने रोकथाम र रोगको बारेमा जानकारी मिल्ने भएको छ ।
लामो समयदेखि गंगागाल हृदयरोग केन्द्रमा कार्यरत डा.लिम्बूले यसअघि मुटुरोगसम्बन्धि विभिन्न लेखरचनाहरू लेख्दै आएका थिए । जर्नलहरूमा समेत उनका लेखहरू पढ्न पाइन्छन् । केही समय गंगालाल हृदयरोग केन्द्रको प्रमुखसमेत बनेका डा.लिम्बूको पुस्तकारको रुपमा यो पहिलो हो ।
पुस्तकमा मुटुरोगसम्बन्धि जानकारी, कोरोनेरी मुटुरोग, उच्च रक्तचाप, बाथ ज्वरो र बाथ मुटुरोग, हार्ट फेइलियर, मुटुको चालमा हुने समस्या र हार्ट ब्लक, जन्मजात मुटुरोग, मुटुरोगको रोकथाम, वायु प्रदुषण र मुटुरोग, नियमित व्यायामको महत्व र मुटुरोग र स्वस्थ्य खानाबारे चर्चा गरिएको छ ।
आजभन्दा ४५००० वर्ष अगाडि चाइनामा नाडी वा धड्कनबारे जानकार हुनु नै चिकित्साशास्त्रमा पहिलो मुटुसँग सम्बन्धित रोग या उपचारको थालनी भएको भन्ने इतिहास छ । आधुनिक चिकित्साशास्त्रमा सन् १८४७ देखि रक्तचापको मापन गरिएको हो । मुटुरोगको इतिहासमा पाइएको पहिलो तथ्य पुस्तकले यसरी जानकारी दिएको छ ।
विश्वमा झण्डै आधा मानिसको मुटुरोगबाटै निधन हुने तथ्य पनि पुस्तकले देखाएको छ ।
मानिसको शरीरको केन्द्रभागमा रहेर मानिसको जीवनभर फैलँदै खुम्चँदै काम गरिरहने अङ्ग मुटुको स्वास्थ्यक्षेत्रदेखि साहित्यदेखि सबै क्षेत्रमा चर्चा हुने गर्दछ । विम्ब बन्ने गर्दछ । चलायमान अङ्गलाई मानिस आफैंले सास्ती दिएर नै मुटुलाई पु¥याइरहेको पुस्तक अध्ययन गर्दा थाहा हुन्छ । स्वस्थ्य खाना, नियमित व्यायाम आदि नै मुटु जोगाउने पहिलो उपचार हुन् भन्ने कुरा हरेक विज्ञापनदेखि पर्चा पम्प्लेटमा पाइन्छन् । पुस्तकमा यिनै कुराको विस्तृतिकरण गर्नुका साथै जन्मजात रोगी हुने, समयसमयमा आउने महामारीले गर्ने असरलगायतका चर्चा छन् ।
यो सिङ्गो पुस्तक डा. युवराज लिम्बूको मात्रै होइन, डा. सुजिब भण्डारी, डा. उर्मिला शाक्य, डा.बिनय रौनियार, शैली थापा, पुष्पा न्यौपानेले लेख्न सघाएका छन् । यसर्थ डा.लिम्बू सम्पादकको रुपमा पनि आफ्नो कुशलता प्रस्तुत गरेका छन् ।
सरल भाषामा लेखिएको पुस्तक आमपाठकले सहज ढङ्गमा बुझ्नेछन् । त्यसैले यसलाई मुटुरोगसम्बन्धि हाते पुस्तक भन्दा फरक नपर्ला । सबैले घरघरमा एक प्रति राखेर मुटुसम्बन्धि आफैं सचेत रहन यस पुस्तकले सघाउ पु¥याउने छ । डा.लिम्बूसहित सुनिता लिम्बू र सम्युक लिम्बू प्रकाशक रहेको यस पुस्तकको मुल्य २५० रहेको छ ।